YEYINTNGE(ကနဒေါ): Wednesday, November 24
BY YeYint Nge ... 11/24/20100comment
“မှန်ရာကို ပြောနေပါမည်” (အခုရော နောင်ရော)
မှန်ရာကို ပြောချင်ပါသည် နှစ်ထောင့်တစ်ဆယ်မှာ မဲလိမ်ဘူးပါသည် ဒါတွေဟာလည်း
(နအဖ)ကြောင့်ဖြစ်ပါသည် အထက်ကခိုင်းတော့ ခိုးရတာဖြစ်သည်...
ဒါတွေကို သိနေပါသည် မဲတွေကို ကြိုတင်ပေးခိုင်းနေသည် ဒါတွေဟာလည်း ကြံ့ဖွံ့ကြောင့်ဖြစ်နိူင်သည်
မပေးမဖြစ် မဲမို့ ပေးရတာဖြစ်သည်...
ဝေဒနာကို ပြောချင်ပါသည် အေးလွင်ညီနှစ်ကို ဒေါသဖြစ်နေသည် ဒါတွေဟာလည်း (နအဖ)စနက်ဖြစ်နိူင်သည်
ဒေါင်းအတုကြောင့်မို့ မဲမရတာ ဖြစ်မည်...
ဦးသုဝေကို ပြောချင်နေတာ ကြာပြီ ရွေးကောက်ပွဲမှာ သူအနိူင်မရပါသည် ဒါတွေဟာလည်း
ကော်မရှင်ကြောင့်ဖြစ်နိူင်သည် အော်ကြက်ကြီးမို့ မဲမရတာ ဖြစ်မည် ...
နိူဝင်ဘာ ၂၁ ရက် တန်ဆောင်တိုင်အကြို သုဝဏအားကစားကွင်းမှာ ဒါရိုက်တာ မောင်မျိုးမင်း စီစဉ်တဲ့ထာဝရ ...ရွှေနှင်းဆီအငြိမ့်မှာ...ရုပ်ရှင်မင်းသား နေတိုး၊ထွန်းထွန်း နှင့် လူငယ်အဖွဲ့ကလွှမ်းမိုးရဲ့သီချင်းကို စာသားချိန်းပြီ သီဆိုထားသည်ကို သဘောကျ၍စာသားအသစ်ဖြင့်ပြန်လည်ရေးဖွဲ့ထားသည်...။
24 Nov 2010 ဒိုင်ယာရီ
24 Nov 2010 Yeyintnge's Diary
အမျိုးသားပြန်လည် ရင်ကြားစေ့ရေးအတွက် ဘာတွေလုပ်ဖို့လို
By ဦးကျော်ဇံသာ ဗုဒ္ဓဟူး, 24 နိုဝင်ဘာ 2010
ဒီတပတ် မျက်မှောက်ရေးရာ ဆွေးနွေးခန်းမှာ မြန်မာ့ဒီမိုကရေစီခေါင်းဆောင် ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ဟာ နေအိမ်အကျယ်ချုပ်မှ ပြန်လွတ်လာပြီးနောက် အမျိုးသားပြန်လည် ရင်ကြားစေ့ရေးကိစ္စ အထူးဂရုစိုက် ပြောကြားနေပါတယ်။ စစ်အစိုးရဘက်ကတော့ လိုက်လျောတဲ့ အမူအယာ တစုံတရာ ပြသမှုမရှိသေးပါဘူး။ ဒီအခြေအနေမှာ စစ်အစိုးရနဲ့ ဒီမိုကရေစီ အင်အားစုတွေ ပြန်လည်သင့်မြတ်ရေး အလားအလာ ရှိနိုင်ပါရဲ့ လား။ တပ်မတော် ထောက်လှမ်းရေးအရာရှိဟောင်း နဲ့ အမေရိကန်နိုင်ငံဆိုင်ရာ မြန်မာသံတမန်ဟောင်း ဦးအောင်လင်းထွဋ် ကို ဦးကျော်ဇံသာ က ဆက်သွယ်မေးမြန်း ဆွေးနွေးသုံးသပ် တင်ပြထားပါတယ်။
ဦးကျော်ဇံသာ ။ ။ မြန်မာနိုင်ငံမှာ ဒီမိုကရေစီခေါင်းဆောင် ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် လွတ်မြောက်လာခဲ့ပါပြီ။ ဒီလို လွတ်မြောက်လာခဲ့တဲ့အတွက် နိုင်ငံတကာ အသိုင်းအဝိုင်းနဲ့ မြန်မာ့အရေးဆိုင်ရာ အဖွဲ့အစည်းတွေ၊ လူပုဂ္ဂိုလ်တဦးချင်းတွေ၊ မြန်မာပြည်သူတွေက ဝမ်းမြောက်ဝမ်းသာ ဖြစ်ကြပြီး ကြိုဆိုကြပါတယ်။ ဆိုတော့ ကျနော် စဉ်းစားကြည့်တာက မြန်မာနိုင်ငံကို လက်ရှိအုပ်စိုးနေတဲ့ မြန်မာ့တပ်မတော်အနေနဲ့ တပ်မတော်တခုလုံး မဟုတ်တောင် တပ်မတော် တစိတ်တပိုင်းအနေနဲ့ ဒီကိစ္စကို ကြိုဆိုတဲ့အနေအထား ရှိပါသလား။ ကြိုဆိုတဲ့ အနေအထားရှိခဲ့ရင် ဘယ်လောက်အထိ ကြိုဆိုကြမယ်လို့ ထင်ပါသလဲ။
ဦးအောင်လင်းထွဋ် ။ ။ ကျနော်အမြင်တော့ ကျနော်တို့ အတွေ့အကြုံအရတော့ ကျနော်တို့ ဗမာပြည်မှာ ရှိနေစဉ်အခါမှာသော်လည်းကောင်း၊ အခု ဝါရှင်တန်မှာ ရောက်နေချိန်မှာသော်လည်းကောင်း နှစ်ခါ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် လွတ်လာတဲ့အခါ အားလုံး ဝမ်းသာကြပါတယ်။ တပ်မတော်သားဆိုတဲ့နေရာမှာ အရာရှိကြီးကအစ အောက်ခြေစစ်သည်အဆုံး ဝမ်းသာကြပါတယ်။ အခုလည်း ကျနော်သိသလောက်၊ ကျနော်ရတဲ့ သတင်းတွေအရ အားလုံး စစ်သည်တွေ၊ တပ်မတော်သားတွေ အားလုံးဝမ်းသာကြတယ်။ အထူးသဖြင့် ဇနီးတွေ၊ သားသမီးတွေကလည်း ဝမ်းသာကြတယ်။ မျှော်လင့်ကြတယ်။ ဒေါ်စု လွတ်လာရင်တော့ စားဝတ်နေရေးတော့ အဆင်ပြေကြမယ်လို့ တွက်ကြပါတယ်။
ဦးကျော်ဇံသာ ။ ။ ဆိုတော့ တပ်မတော်သားတွေဆိုတဲ့နေရာမှာ အရာရှိနဲ့ အောက်ခြေက အခြားအဆင့် အကြပ်တပ်သားတွေ ရဲဘော်တွေများ ဖြစ်မလား။ ဘာကြောင့်လည်းဆိုတော့ လွတ်လာပြီးနောက်မှာ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် က အင်မတန် သင့်မြတ်လိုတဲ့ သဘောထားနဲ့ ပြောနေပေမယ့်လည်း စစ်အစိုးရဘက်က တုံ့ပြန်ရာမှာ အရင်အလိုပဲ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် လည်ပတ်မိတဲ့ HIV/AIDS လူနာတွေ နေတဲ့နေရာကိုပင် သူတို့ ပိတ်မယ်ဆိုတာမျိုး ပြောနေတော့ သူတို့အနေနဲ့ လိုက်လျောတဲ့သဘောထား မတွေ့ရပါဘူး။ အဲဒါကြောင့် သူတို့ဘက်က လိုက်လိုက်လျောလျော စိတ်ရင်စေတနာနဲ့ ကြိုဆိုကြရဲ့ လား။ အထူးသဖြင့် အထက်ပိုင်းက ပုဂ္ဂိုလ်တွေပေါ့။
ဦးအောင်လင်းထွဋ် ။ ။ အထက်ပိုင်းက ပုဂ္ဂိုလ်တွေဆိုတဲ့နေရာမှာ အားလုံးသိပါတယ်။ တဦးတည်းက ချုပ်ကိုင်ထားတဲ့ သဘောပါ။ အောက်ခြေ ဗိုလ်ချုပ်မှုးကြီး မောင်အေး က အစ အောက်ခြေ ရဲဘော်များက ဝမ်းသာကြပါမယ်။ ကျနော် ပထမပြောကြားလိုပါတယ်။ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် အခု လွတ်လာတဲ့အခါ အရမ်း tactful ဖြစ်ပါတယ်။ သူပြောသွားတဲ့ စကားတွေလည်း ကျနော် နားထောင်ရပါတယ်။ ဘာဖြစ်လို့လည်းဆိုတော့ ကျနော်တို့ တပ်မတော်ထဲမှာ ကျနော်တို့ ရှိစဉ်ကတည်းက ကျနော်တို့ကို brainwash မှိုင်းတိုက်မှိုင်းသွင်းထားတာက ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် နဲ့ အန်အယ်လ်ဒီ တက်လာရင်၊ အာဏာရလာရင် မင်းတို့တပ်မတော်၊ ငါတို့ တပ်မတော်ကို ဖြိုခွဲလိမ့်မယ်။ နောက် ကျနော်တို့ စစ်သားတွေကို ရိုက်သွင်းထားတာက ဒီမိုကရေစီ စကားလုံးက အရင်းရှင်စနစ်ကလာတာ၊ ဒီမိုကရေစီဆိုတာ ငါတို့ ရန်သူပဲဆိုတဲ့ အသုံးအနှုန်းတွေက စစ်သားတွေနဲ့ ကျနော်တို့ အရပ်သားဝန်ထမ်းတွေထဲမှာ ဝါဒဖြန့်ထားတဲ့ စကားလုံးတွေ ဖြစ်ပါတယ်။ အခုအချိန်အခါမှာ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ဘက်က အခုလို ပျော့ပျော့ပျောင်းပျောင်း ပြောလာတယ်။ ဒီနေ့ ကျနော်ကြားပါတယ် - တပ်မတော် စစ်ဆေးရုံမှာသွားပြီး သွေးလှုတဲ့ကိစ္စတွေ ရှိလာတယ်ဆိုတာ အင်မတန်မှ tactful ဖြစ်ပါတယ်။ ကျနော် ထင်ပါတယ် လူကြီးပိုင်းအနေနဲ့ ဒီကိစ္စတွေကို ကျေနပ်ကြမယ်လို့ ထင်ပါတယ်။ အခုန ဦးကျော်ဇံသာ ပြောသွားတဲ့ HIV ကိစ္စကတော့ ကျနော်ထင်တယ် အောက်ခြေအာဏာပိုင်အဖွဲ့က သူတို့ လုပ်ထုံလုပ်နည်းအရ လုပ်ရတဲ့အလုပ်ဖြစ်တယ်လို့ ကျနော်မြင်ပါတယ်။ ဘာဖြစ်လို့ ဒီလိုပြောရသလဲဆိုရင် သိပ်မကြာခင်မှာ ရန်ကုန်တိုင်း ကျန်းမာရေးဦးစီးမှုး ဦးစီးပြီးတော့ အဖွဲ့တွေ မဖြူဖြူသင်းတို့နဲ့ သွားတွေ့တယ်ဆိုတာကို ကြားရပါတယ်။ ကျန်းမာရေး ဦးစီးမှုးတို့ လာတယ်ဆိုတာ အပေါ်ကပေါ်လစီနဲ့ လာတဲ့သဘောဖြစ်ပါတယ်။ ဟိုဘက်ကလည်း ပျော့ပျော့ပျောင်းပျောင်းနဲ့ ပြန်ပြတယ်လို့ မြင်ပါတယ်။
ဦးကျော်ဇံသာ ။ ။ နောက်တခုက ဦးအောင်လင်းထွဋ် ပြောတဲ့နေရာမှာ ဦးအောင်လင်းထွဋ်တို့ တပ်ထဲမှာရှိစဉ်ကတည်းက ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် က ဒီမိုကရေစီသမား၊ ဒီမိုကရေစီဆိုတာ ပြည်ထောင်စုပြိုကွဲရေးဖြစ်ပြီး စစ်တပ်ကို ပထုတ်မှာဖြစ်တယ်။ အနောက်တိုင်းလိုလားတဲ့ အင်အားစုဖြစ်တယ်ဆိုတဲ့ မှိုင်းတိုက်ထားတာ အမျိုးမျိုးရှိလာခဲ့တယ်။ အခုထိလည်း ကျနော်ထင်တယ် အဲဒီ မှိုင်းတိုက်ထားတာက မှိုင်းတိုက်မြဲတိုက်နေလိမ့်မယ်၊ ရိုက်သွင်းမြဲရိုက်သွင်းနေမယ်လို့ ထင်တယ်။ အဲဒီ ရိုက်သွင်းခံထားရတာတွေက ရုတ်တရက် တပ်မတော်သားတွေ ခေါင်းထဲက ပယ်ဖျက်နိုင်ပါ့မလား။
ဦးအောင်လင်းထွဋ် ။ ။ မှန်ပါတယ်။ ရုတ်တရက်က ပယ်ဖျက်ဖို့က ကျနော်တို့ တဖတ်ပေါ့ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် နဲ့ အန်အယ်လ်ဒီ ရဲ့  deal လုပ်တဲ့ပေါ်မှာ မူတည်ပါလိမ့်မယ်။ ဆက်ဆံဆောင်ရွက်တဲ့အပေါ်မှာ မူတည်ပါလိမ့်မယ်။ ဘာဖြစ်လို့လည်းဆိုတော့ အဲဒီပြောထားတာတွေ မဟုတ်ဘူးဆိုတာကို တပ်မတော်ထဲမှာ တော်တော်များများ သိပါတယ်။ တိုင်းပြည် ဆင်းရဲမွဲတေးနေတာဟာ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် ကြောင့်လည်းမဟုတ်ဘူး၊ အန်အယ်လ်ဒီကြောင့်လည်း မဟုတ်ဘူး။ စနစ်မှားနေတာကြောင့် ဆိုတာကို တပ်မတော်ထဲမှာ အရာရှိ အရာခံအကြပ်အားလုံး လက်ခံတဲ့အနေအထားမျိုး ရှိပါတယ်။ တခုပဲ သူတို့ကြောက်နေတာက ဒီမိုကရေစီ လိုလားတဲ့အဖွဲ့က တပ်မတော် တပ်မတော်ဆိုတဲ့ စကားလုံးကို အသုံးပြုပြီး ပုတ်ခတ်တဲ့အခါကြတော့ အားလုံးက သိမ်းကြုံပြီးတော့ အပြောခံရတဲ့သဘောမျိုး ရှိလို့ပါ။
ဦးကျော်ဇံသာ ။ ။ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ဘက်က တွေ့ဆုံတဲ့နေရာ၊ ပြောဆိုတဲ့နေရာမှာ tactful ဖြစ်ဖို့ ပရိယာရ်ကြွယ်ဖို့၊ သူတို့ဘက်က ကျွမ်းကျွမ်းကျင်ကျင် ဖြစ်ရင် ဒီ မှိုင်းတိုက်ထားတာတွေ ပျောက်သွားနိုင်မယ်ဆိုတော့ တွေ့ဆုံဆွေးနွေးဖို့ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ဘက်က လမ်းဖွင့်ခဲ့တာ ကြာပါပြီ။ စစ်တပ်ဘက်က ဆွေးနွေးပွဲ စားပွဲဝိုင်းကို မှန်ကန်တဲ့သဘောထားတဲ့ တခါမှ တက်မလာတာ၊ ဆက်ဆံရေးဝန်ကြီးတော့ ခန့်ထားပါရဲ့  ဒါပေမဲ့ ဘာမှ ခရီးမရောက်တာ ဖြစ်နေတော့ တပ်မတော် အကြီးအကဲတွေ၊ အာဏာပိုင်အကြီးအကဲတွေကို တွေ့ဆုံဆွေးနွေးရေး စားပွဲဝိုင်းကို ရောက်လာအောင် ဘယ်ပုံဘယ်နည်းနဲ့များ ခေါ်ဆောင်နိုင်မယ်လို့ ထင်ပါသလဲ။
ဦးအောင်လင်းထွဋ် ။ ။ ၂၀၀၄ ခုနှစ် အမျိုးသားညီလာခံ ပြန်မစခင်မှာ အန်အယ်လ်ဒီ နဲ့ အစိုးရအဖွဲ့နဲ့ အကြေအလည် ဆွေးနွေးခဲ့တာတွေ ရှိပါတယ်။ ကျနော်ကိုယ်တိုင် သံရုံးမှာရှိနေစဉ် ကျနော်ကို ရန်ကုန်ကနေ ကျနော့်သူငယ်ချင်းတွေက အကိုရေ ၉၅% တော့ သေချာပြီ၊ ကျနော်တို့ ဝမ်းသာရတော့မယ်ဆိုတဲ့ အဖြေမျိုးကို ပေးပါတယ်။ အဲဒီအချိန်တုန်းက ကျနော်တို့သိသလောက် မူအားဖြင့် သဘောတူပြီးပြီ။ ဗိုလ်ချုပ်မှုးကြီးသန်းရွှေ ကိုယ်တိုင်လည်း မူအားဖြင့် သဘောတူပြီးသာဆိုတာကို သိရပါတယ်။
ဦးကျော်ဇံသာ ။ ။ ဟုတ်ကဲ့ ကျနော်လည်း ကြားသိရပါတယ်။ ဘာကြောင့် ပျက်သွားရတယ်ဆိုတာကို လူတိုင်းစိတ်ဝင်စားကြပါတယ်။ အခုထိ ကျနော်တော့ မရှင်းသေးဘူး။
ဦးအောင်လင်းထွဋ် ။ ။ ဘာကြောင့် ပျက်သွားတယ်ဆိုတာကိုတော့ ကျနော်တော့ အတိအကျ မပြောနိုင်တာက ကျနော်တို့ သိသလောက် ကောလဟာလ rumor အနေနဲ့ ကျနော်တို့ သိရတာကတော့ အဓိက ကြံ့ခိုင်ဖွံ့ဖြိုးရေး ခေါင်းဆောင်ပိုင်း နဲ့ ဗိုလ်ချုပ်မှုးကြီးရဲ့  မိသားစုပိုင်းတို့ရဲ့  ကန့်ကွက်မှုကြောင့် ဖြစ်သွားတယ်။ အဲဒီလို လက်ခံလိုက်ရင် သူတို့ ဒုက္ခရောက်သွားမယ်၊ ကြံ့ခိုင်ဖွံ့ဖြိုးရေးအဖွဲ့လည်း ဒုက္ခရောက်သွားမယ်ဆိုတာမျိုးကို ရှိတဲ့အတွက်ကြောင့် ဒီ ဆွေးနွေးပွဲ ပျက်သွားတယ်လို့ ထင်ပါတယ်။
ဦးကျော်ဇံသာ ။ ။ ကြံ့ခိုင်ဖွံ့ဖြိုးရေးဆိုရင် အခု ရွေးကောက်ပွဲမှာ မဲအများဆုံးနိုင်တယ်။ သူတို့လိုချင်တဲ့ နံပတ်ပြပြီး နိုင်တဲ့ဆိုတဲ့ အဖွဲ့အစည်း။ အခုအခါမှာရော သူတို့ ပပျောက်သွားမှာကို ဒီအချိန်မှာ မစိုးရိမ်ပေဘူးလား။
ဦးအောင်လင်းထွဋ် ။ ။ အခုကတော့ သူက နှစ်ခုကိုင်သွားပြီ။ တခုက ၁၉၉၀ ရွေးကောက်ပွဲကို နှိုင်းယှဉ်နိုင်ဖို့ ၂၀၁၀ ရွေးကောက်ပွဲက ပြီးသွားခဲ့ပြီ။ ဒီတော့ ၂၀၁၀ နဲ့ ၁၉၉၀ က အပေးအယူတော့ လုပ်ရမယ့်အနေအထားမျိုး ဖြစ်လာပါမယ်။ ၂၀၁၀ ဆိုရာမှာ ၂၀၀၈ ဖွဲ့စည်းပုံနဲ့ အပေးအယူလုပ်ရပါမယ်။ အထူးသဖြင့် ၁၉၉၀ မှာ အန်အယ်လ်ဒီ က ရွေးကောက်ပွဲ နိုင်ခဲ့တယ်၊ ၂၀၁၀ မှာ ကြံ့ဖွံ့က ရွေးကောက်ပွဲ နိုင်တယ်ဆိုတဲ့ ပုံစံမျိုးရှိလာတဲ့ အနေအထားမျိုး ရှိပါတယ်။ ဒါကြောင့်မို့ အခုအချိန်မှာလည်း ကြံ့ဖွံ့ကိုလည်း ပစ်ပယ်လို့ရတဲ့ အနေအထားမရှိဘူးလို့ မြင်ပါတယ်။ ၂၀၁၀ ရွေးကောက်ပွဲကို စွန့်လွှတ်ပြီးတော့ ကျနော်အမြင်တော့ ဆွေးနွေးပွဲ ပြန်စဖို့တော့ ဖြစ်ဟန်မတူဘူး။ ဖြစ်နိုင်ချေတော့ မရှိလောက်ဘူး။ ၂၀၁၀ ရွေးကောက်ပွဲ သူတို့ဆက်လုပ်သွားမှာပဲ။ အစိုးရဖွဲ့မယ်။ အဲဒီ အစိုးရဖွဲ့ပြီးမှ ဆွေးနွေးပွဲ ဖြစ်ကောင်းဖြစ်လာမယ့် အနေအထားရှိပါတယ်။
ဦးကျော်ဇံသာ ။ ။ အဲဒီ အစိုးရဖွဲ့မယ့် ကိစ္စနဲ့ ပတ်သက်ပြီးတော့ သမ္မတ ဘယ်သူဖြစ်လာမယ်ဆိုတာကလည်း ရန်ကုန်မှာ မကြာသေးခင်က လုပ်ခဲ့တဲ့ ကြံ့ခိုင်ဖွံ့ဖြိုးရေး သတင်းစာရှင်းလင်းပွဲမှာ သတင်းထောက်တွေ မေးကြပါတယ်။ သူတို့ အတိအကျ မဖြေခဲ့ပါဘူး။ ဗိုလ်ချုပ်မှုးကြီး နှစ်ဦးတော့ မပါပါဘူးလို့ ပြောခဲ့တာ ရှိပါတယ်။ ဦးအောင်လင်းထွဋ် အနေနဲ့ တပ်မတော်ဘက်က ဘယ်လိုသတင်းများ ကြားမိပါသလဲ။ ဗိုလ်ချုပ်မှုးကြီးနှစ်ဦး က အစိုးရပြန်ဖွဲ့တဲ့အခါမှာ ပြန်ပါမလား၊ အဆင့်မြင့် ရာထူးတွေ သြဇာအာဏာတွေ သူတို့လက်ထဲမှာ ချုပ်ကိုင်ထားမလား။ အဲဒီလို ချုပ်ကိုင်ထားရင် တွေ့ဆုံဆွေးနွေးရေးအတွက် အလားအလာ ကောင်းလာနိုင်ပါရဲ့ လား။
ဦးအောင်လင်းထွဋ် ။ ။ ၂၀၀၉ ခုနှစ်လောက်ကတည်းက ရခဲ့တဲ့သတင်းတွေ၊ အတိအကျ အခိုင်အမာပါ။ သူတို့ နီးစပ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေရဲ့  အပြောအရတော့ ဗိုလ်ချုပ်မှုးကြီးသန်းရွှေ နဲ့ ဗိုလ်ချုပ်မှုးကြီးမောင်အေး နှစ်ယောက်စလုံးကတော့ သမ္မတလုပ်ဖို့ အစီအစဉ် မရှိဘူး။ ဒါပေမဲ့ အာဏာကိုတော့ စွန့်လွှတ်သွားမယ့် အနေအထားတော့ မရှိပါဘူး။ နောက်ကွယ်မှာ တနည်းနည်းနဲ့ ကြိုးကိုင်မယ့် အနေအထားမျိုး ရှိပါတယ်။ လှန်လို့ရမယ့် အနေအထားတော့ မရှိပါဘူး။
ဦးကျော်ဇံသာ ။ ။ ဆိုတော့ သူတို့ အာဏာကြိုးကိုင်နေသမျှ အထူးသဖြင့် ဗိုလ်ချုပ်မှုးကြီးသန်းရွှေ က အာဏာကို ကြိုးကိုင်နေသမျှ ကျနော်တို့ ဆွေးနွေးခဲ့တဲ့ တွေ့ဆုံဆွေးနွေးရေးအလားအလာ ဆိုတာက ဘယ်လိုရှိနိုင်ပါသလဲ။
ဦးအောင်လင်းထွဋ် ။ ။ ပြောလို့တော့ မရဘူးခင်မျ။ ဘယ်ဖြစ်လို့လည်းဆိုတော့ အသက်အရွယ်လည်း စကားပြောလာတဲ့ အနေအထားတော့ ရှိလာပါပြီ။ ဗိုလ်ချုပ်မှုးကြီးစိတ် မပျော့သွားဘူးလို့တော့ ပြောမရပါဘူး။ တချိန်တခါက ငယ်တုန်းရွယ်တုန်း လုပ်နိုင်ကိုင်နိုင်တဲ့ အချိန်အခါမှာ စိတ်ဓါတ်တက်တက်ကြွကြွနဲ့ ဘာတုန်းကွ ငါဘာလဲ မင်းဘာလဲဆိုတာမျိုး ရှိကြပါတယ်။ အခုအချိန်အခါမှာတော့ တခုပေါ့ ဖြောင်းဖြောင်းဖြဖြနဲ့ ပါးပါးနပ်နပ် လိမ်လိမ်မာမာနဲ့ ချည်းကပ်ပြီး တဦးနဲ့တဦး အပေးအယူလုပ်ကြမယ်ဆိုရင်တော့ ဖြစ်နိုင်ချေ ရှိပါတယ်။ အခုက ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ဘက်ကလည်း အများကြီး ပရိယာရ်ကြွယ်ဝတဲ့အတွက်ကြောင့် ကျနော်တို့ အရမ်းသဘောကြပါတယ်။ ဘာဖြစ်လို့လည်းဆိုတော့ ကျနော်တို့ လူကြီးတွေ ကျနော်သိတယ် သူတို့ကို အတင်းအဓမ္မ မင်း ဘာဖြစ်တယ် ညာဖြစ်တယ်၊ ဘာလုပ်မယ် ညာလုပ်မယ်ဆိုရင် ပိုဆိုးတယ်။ ပိုပြီးတော့ အရွှဲတိုက်ပြီး ပိုလုပ်လေ့ရှိတယ်။ ဒါကလည်း ကျနော့် အတွေ့အကြုံအရ ကျနော် ကေအိုင်အေ နဲ့ ငြိမ်းချမ်းရေး ဆွေးနွေးပွဲတုန်းက ကျနော်တို့ စပြီးလုပ်ကြတဲ့အခါမှာ ကေအိုင်အေ ကို ဘာပြောလဲဆိုတော့ ဒီ ကောင်တွေကို လက်နက်ချခိုင်းလိုက်လို့ ပြောတယ်။ အဲဒီတော့ ကျနော်တို့ ကြားထဲက negotiator လုပ်တဲ့ သူတွေက ကေအိုင်အေ ကို ဒီအတိုင်း သွားပြောရင် ကေအိုင်အေ က ဘယ်ကြိုက်မလည်း။ ကြားထဲက လုပ်တဲ့သူတွေက ကေအိုင်အေ ကိုလည်း နားလည်းအောင် ပြောပြတယ်။ ကေအိုင်အေ က ဘာပြန်ပြောလည်းဆိုရင် ဒါဆိုရင် သူတို့ မျောက်သစ်ကိုင်းလွတ်တဲ့ သဘောဖြစ်သွားမယ်ပေါ့။ သူတို့ကိုလည်း ပြန်ကြည့်ပေးပါအုံးဆိုတာကို ကေအိုင်အေ ဘက်က request လုပ်တာတွေရှိတယ်။ ဒါတွေက တယောက်နဲ့တယောက် အပေးအယူတဲ့သွားတဲ့အခါမှာ ငြိမ်းငြိမ်းချမ်းချမ်း ဖြစ်သွားတာမျိုး ရှိပါတယ်။
ဦးကျော်ဇံသာ ။ ။ တိုင်းရင်းသားအရေးတွေလည်း နောက်တခါ ဦးအောင်လင်းထွဋ်နဲ့ ဆွေးနွေးချင်ပါသေးတယ်။ အခု အမျိုးသားဒီမိုကရေစီ အဖွဲ့ချုပ် ဒီမိုကရေစီအင်အားစု နဲ့ ဆွေးနွေးရေးဖြစ်နိုင်တဲ့ အလားအလာကို မေးချင်တဲ့ နောက်ဆုံးမေးခွန်းက ဗိုလ်ချုပ်မှုးကြီးရဲ့  မိသားစုကဏ္ဍဖြစ်ပါတယ်။ စောစောကပြောတယ် ၂၀၀၄ ခုနှစ်တုန်းက အလားအလာကောင်းနေပေမယ့် သူ့မိသားစုနဲ့ ကြံ့ခိုင်ဖွံ့ဖြိုးရေးက သဘောမတူလို့ ဖြစ်ခဲ့တယ်လို့ ပြောခဲ့ပါတယ်။ ကြံ့ခိုင်ဖွံ့ဖြိုးရေးကိုတော့ ပြောပြီးပြီ။ ၂၀၁၀ ရွေးကောက်ပွဲမှာ သူတို့နိုင်ထားတာကို စွဲကိုင်ထားတော့ ဒီရွေးကောက်ပွဲ နှစ်ခုကြားမှာ ညှိရမယ်လို့ဆိုတယ်။ မိသားစုရဲ့  သဘောထားကရော ပြောင်းလဲနိုင်ပါ့မလား။
ဦးအောင်လင်းထွဋ် ။ ။ မိသားစုရဲ့  သဘောထားကလည်း အခုက တော်တော်လေး မိသားစုကိုလည်း ဗိုလ်ချုပ်မှုးကြီးအနေနဲ့ ပြောရယ်ဆိုရယ်နဲ့ ဆူပူတဲ့အသံတွေ ကျနော်တို့ ကြားမိပါတယ်။ ရှင်းရှင်းပြောရရင် ငြိမ်ငြိမ်နေခိုင်းတာပေါ့။ ဘာဖြစ်လို့လည်းဆိုတော့ အခု သိသလောက် မစ္စတာ ကင်တာနားရဲ့  report က အများကြီး affect ဖြစ်ပါတယ်။ ဒီဥစ္စာက ကျနော်ရှိတဲ့ကာလ ၂၀၀၁ ခုနှစ်ကတည်းက သံရုံးမှာရှိစဉ် လှမ်းမေးခဲ့ဘူးပါတယ်။ အဲဒီအချိန်တုန်းကတော့ မီလိုဆိုဗစ်တို့ကို အရေးယူတဲ့အချိန်ပေါ့။ ဒါမျိုးကိစ္စမျိုးကို သူတို့ လုံးဝအဖြစ်မခံချင်ပါဘူး။ အဲဒီတော့ အန်အယ်လ်ဒီ ဘက်ကလည်း သင်ပုန်းချေရေးလို့ ပြောတဲ့ဟာက ဘယ်လောက်အထိ သင်ပုန်းချေ နိုင်မယ်ဆိုတာကို ပြောဖို့လိုပါတယ်။
ရဲဘော်ဖိုးသံချောင်း | ဗုဒ္ဓဟူးနေ့၊ နိုဝင်ဘာလ ၂၄ ရက် ၂၀၁၀ ခုနှစ် ၁၄ နာရီ ၁၂ မိနစ်
နအဖရဲ့၂ဝ၁ဝရွေးကောက်ပွဲဟာ အများတွက်ထားတဲ့အတိုင်း အဆုံးသတ်သွားတဲ့အတွက် ဘာမှ စိတ်ဝင်စားစရာ မကောင်းလို့ မဆိုနိုင်ပါဘူး။ အကြောင်းက နအဖဗိုလ်ချုပ်တွေက ဘယ်သူမှတွက်မထားတဲ့ ညစ်နည်းတွေကို အသုံးပြု သွားလို့ပါပဲ။ ကြိုတင်မဲ၊ ပြည်ပရောက်မဲတွေနဲ့ ညစ်လို့ရတယ်၊ ညစ်ခဲ့တယ်ဆိုတာ အနိုင်နိုင်ငံသမိုင်းမှာတော့ မတွေ့ဖူး သလောက်ဖြစ်ပါတယ်။ သေချာတာက နအဖဟာ အာဏာရှင်တို့ရဲ့ လက်နက်တိုက်ထဲကို လက်နက်သစ်တွေ ဖြည့်ဆည်း လိုက်တယ်ဆိုတာပါပဲ။ ဒီအတွက် အနိုင်နိုင်ငံက အာဏာရှင်တွေက သူတို့ကို ကျေးဇူးတင်ကြပါလိမ့်မယ်။
ဒီလိုနဲ့တကောင်ထဲ ပြေးတဲ့မြင်းပွဲမှာ စိတ်ဝင်စားစရာလေးတွေ တွေ့ခဲ့ရသလို လာမဲ့အစိုးရဖွဲ့မှုဟာလဲ သူတို့ချည်း ဖြစ်မှာသေချာပေမယ့် စိတ်ဝင်စားစရာတွေ တွေ့ရမှာ သေချာပါတယ်။ စီစဉ်ပြီးသားတော့ စီစဉ်ပြီးသားချည်းပါ။ ဒါပေမဲ့ မျက်လှည့်ဆရာရဲ့အမည်းရောင် အိတ်ကြီးထဲက ဘာတွေထွက်လာမလဲဆိုတာကို စောင့်ကြည့်ကြရသလို ညာမှန်းသိပေမယ့် စိတ်ဝင်စားစရာတွေ၊ အံ့သြစရာတွေ တွေ့ရတတ်ပါတယ်။ ရွေးကောက်ပွဲ မကျင်းပတဲ့ နေရာမှာတောင် သူ့လူတွေနိုင်ပါတယ်လို့ အဖြေထွက်အောင် လုပ်နိုင်တဲ့ စစ်အုပ်စုဟာ ကမ္ဘာကို တခြားအံ့ဘနန်းတွေ လုပ်ပြအုံးမှာ သေချာပါတယ်။
ဒီရွေးကောက်ပွဲမှာပေါ်ထွက်လာတဲ့ အမှန်တရားတခုက နအဖအနေနဲ့ ကိစ္စ(ကြီး) တခုအကောင်အထည် ဖော် လိုက်တိုင်း နိုင်ငံရေးအင်အားစုတွေထဲမှာ ခိုဝင်နေတဲ့ ကိုယ်ကျိုးသမားတွေ ပွင့်ကျ လာပြီး တဖက်မှာတော့ နအဖရဲ့ မရိုးသား မှုတွေပွင့်ကျလာ၊ အတိုက်အခံတွေဘက်မှာ အင်အားတွေတိုးလာတယ်ဆိုတာပါပဲ။
ဗမာပြည်ရဲ့ ၂ဝ၁ဝ ရွေးကောက်ပွဲအလွန်နိုင်ငံရေးဟာ အဲဒီလို အလိမ်အညာ ညစ်ပတ်မှုတွေနဲ့ အစချီလိုက်ပါပြီ။ တပါ ထဲမှာ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ကို အိမ်ချုပ်က လွှတ်လိုက်တာဟာ လှုပ်လှုပ်ရွရွ ဖြစ်သွားပါတယ်။ ဒါ့အပြင် ဒီရွေးကောက်ပွဲ ကျမှ ဖွတ်ထွက်မှန်း သိတယ်ဆိုသူတွေရဲ့ ရင်ဖွင့်ပွဲတွေ၊ အံထုတ်ပွဲတွေနဲ့ နည်းနည်းတောင် မြိုင်မြိုင်ဆိုင် ဖြစ်နေတယ်လို့ ဆိုရမလားပါပဲ။ ဒီကြားထဲမှာ မြဝတီဘက်က သေနတ်သံ မြည်လာတာဟာ ဆင်ဖိုနီ တီးဝိုင်းကြီးရဲ့ တီးလုံးကို ဗုံသံတွေ ဖြည့် လိုက်သလို ဖြစ်သွားပါတယ်။
မှန်တာပြောရရင် ထိုင်နေရင် အကောင်းသား၊ ထသွားမှ ကျိုးမှန်းသိဆိုသလို ရုပ်ပျက်ဆင်းပျက် ရွေးကောက်ပွဲကြောင့် နလံမထူဖြစ်နေတဲ့ နအဖစစ်အစိုးရဟာ ဒေါ်စုကို မတတ်သာလို့ လွှတ်ပေးလိုက်တော့ ကြမ္မာ ပိုငင်စရာ ဖြစ်လာပါတယ်။ ဒါတွေနဲ့တဆက်ထဲမှာပဲ နိုင်ငံရေး အမြင်မျိုးစုံ၊ လုပ်ငန်း အစီအစဉ်မျိုးစုံကို ကြားနေ ဖတ်နေရပါတယ်။ မီဒီယာတွေက မေး၊ အမေးခံရသူကဖြေ ပြည်သူလူထုအဖို့ ဦးဏှောက် လှုပ်ရှားစရာတွေ အများကြီး ရနေတယ်လို့ဆိုနိုင်ပါတယ်။ အဓိက အားဖြင့်တော့ ရှေ့ဘယ်လို ဆက်လုပ်ကြမလဲ ဆိုတာကို စိတ်အဝင်စားကြဆုံးပါပဲ။
ပြည်သူလူထုကြီးရဲ့မျှော်လင့်ချက်ဟာ ကြံ့ဖွံ့အပေါ်မှာ ထားတာမဟုတ်ကြောင်း ထင်ရှားလှပါတယ်။ ဗမာပြည် ပြည်သူလူထုကြီးရဲ့ နိုင်ငံရေးအသိ၊ နိုင်ငံရေး စိတ်ဓာတ်ဟာ အမြဲနိုးကြား တက်ကြွနေတယ်ဆိုတာ ပေါ်လွင်နေပါတယ်။
တပါထဲမှာ ဒီလိုအခွင့်အရေးမျိုးဟာ အချိန် တိုင်း၊ ဒါမှမဟုတ် မကြာခဏ ပေါ်တတ်တာ မဟုတ်ဘူး ဆိုတာ သတိထားသင့်ပါတယ်။ အခွင့်အရေးကို မယူလိုက်နိုင်ရင် သမိုင်း တကွေ့ ပြန်စောင့်ရတဲ့အထိ ဖြစ်သွားတတ် ပါတယ်။
ဒီရွေးကောက်ပွဲမှာ ပေါ်ထွက်လာတဲ့ အမှန်တရားတခုက နအဖအနေနဲ့ ကိစ္စ(ကြီး) တခု အကောင်အထည် ဖော်လိုက်တိုင်း နိုင်ငံရေး အင်အားစုတွေထဲမှာ ခိုဝင်နေတဲ့ ကိုယ်ကျိုးသမားတွေ ပွင့်ကျလာပြီး တဖက်မှာတော့ နအဖရဲ့ မရိုးသားမှုတွေ ပွင့်ကျလာ၊ အတိုက်အခံတွေဘက်မှာ အင်အားတွေ တိုးလာတယ် ဆိုတာပါပဲ။ နောက်ပြီး ဒီလိုအချိန်တိုင်းမှာ ဗမာပြည် ပြည်သူတွေရဲ့ရပ်တည်ချက်ဟာ မယိမ်းယိုင်ဘူး၊ ခိုင်မာတယ်ဆိုတာလဲ အမြဲတွေ့ရပါတယ်။ အမှန်ပြောရရင် စစ်အုပ်စုရဲ့ ဒီလိုခြေလှမ်းတွေဟာ ပြည်သူတွေကို စမ်းသပ်တာ မဟုတ်ဘူး၊ နိုင်ငံရေးသမားတွေကို စမ်းသပ်တာဖြစ်တယ်လို့ မြင်ရပါမယ်။ နဝတနအဖတို့ရဲ့ ညောင်နှစ်ပင် ညီလာခံဖြစ်စဉ်ကြီးကိုပဲ ပြန်ကြည့်လိုက်ပါ။ နောက်ပြီး ၂ဝဝ၈ဖွဲ့စည်းပုံ အခြေခံ ဥပဒေအတည်ပြုပွဲနဲ့ အခု ဒီရွေးကောက်ပွဲ။ သူတို့တလှမ်း လှမ်းလိုက်တိုင်း ပြည်သူတွေဘက်မှာ အင်အားတွေ တိုးလာတာပဲ မဟုတ်ပါလား။ ဒါ့အပြင် သူ့တပ်ထဲမှာပါ ဂယက်ရိုက်တာဟာ တရားတခုလိုတောင် ဖြစ်နေပါပြီ။
ပြောရရင်တော့ ဒီလိုအခြေအနေမျိုးဟာ နိုင်ငံရေး အင်အားစုတွေ အမြော်အမြင်ရှိရှိနဲ့ အမျိုးသား သွေးစည်းညီညွတ်ရေးကို တည်ဆောက်ရမယ့် အချိန်ဖြစ်ပါတယ်။ ဒီလိုအခြေအနေမျိုးဆိုတာက နအဖစစ်အစိုးရရဲ့ မရိုးသားမှု၊ ညစ် ပတ်မှုတွေ ပြည်တွင်းပြည်ပမှာ ဘောလောပေါ်ပြီး ကမ္ဘာအနှံ့က ရှုတ်ချနေကြချိန်၊ ဗမာပြည် ပြည်သူများရဲ့ နိုင်ငံရေး နိုးကြားမှုအရှိန်အဟုန်မြင့်မားနေချိန်၊ စည်းလုံးညီညွတ်ဖို့အထူးလိုအပ်ကြောင်း အားလုံးက သဘောပေါက်လက်ခံနေကြ ချိန်ကို ဆိုလိုတာဖြစ်ပါတယ်။ ဗမာပြည်သမိုင်းကိုပြန်ကြည့်လိုက်ရင် ဒီလိုအခြေအနေမျိုးတွေမှာ ဗမာ့နိုင်ငံရေးကို တဆင့်တွန်းတင်ခဲ့တာတွေ တွေ့ကြရမှာပါ။ တပါထဲမှာ ဒီလိုအခွင့်အရေးမျိုးဟာ အချိန်တိုင်း၊ ဒါမှမဟုတ် မကြာခဏ ပေါ်တတ်တာ မဟုတ်ဘူးဆိုတာ သတိထားသင့်ပါတယ်။ အခွင့်အရေးကို မယူလိုက်နိုင်ရင် သမိုင်းတကွေ့ ပြန်စောင့်ရတဲ့ အထိဖြစ်သွားတတ်ပါတယ်။ ဘုံရည်မှန်းချက်ရှိရင် ဘုံလုပ်ငန်းစဉ်ဆိုတာ ချမှတ်လို့ရနိုင်ပါတယ်။ တဖက်နဲ့ တဖက် ညှိညှိနှိုင်းနှိုင်း၊ တိုင်တိုင်ပင်ပင်၊ အပေးအယူရှိရှိနဲ့ လုပ်သွားကြဖို့ပဲလိုတာပါ။ ဒါပေမဲ့ နည်းနာတော့ကြွယ်ဝဖို့ လိုပါတယ်။ လှေကြီးထိုးနည်းတမျိုးထဲနဲ့တော့ မပြီးဘူးဆိုတာ နှလုံးပိုက်ရပါမယ်။ နအဖကိုယ်တိုင်က အထက်လမ်းရော အောက်လမ်း ပါလုပ်နေချိန်မှာ ကိုယ်က စင်းစင်းကြီး လုပ်နေလို့ မဖြစ်ပါဘူး။ ဘက်ပေါင်းစုံ ညစ်ပတ်အုပ်စိုးနေတဲ့ စစ်အာဏာရှင်တွေနဲ့ ရင်ဆိုင်ရာမှာ သူ့လို ညစ်ပတ်တာ မလုပ်ပေမယ့် နည်းနာမျိုးစုံတော့ကျင့်သုံးရပါမယ်။
ရှစ်ခေါဘဏီတပ်ကြီးကိုကိုင်ထားပြီး အာဏာ သိမ်းခွင့်ရှိကြောင်း တကြိမ်းထဲ ကြိမ်းနေသူ တွေကို လက်ကမ်းတာ တခုထဲနဲ့တော့ မပြီးသေးဘူး ထင်ပါတယ်။
ဒါပေမဲ့ ဒီအချိန်မှာကိုယ့်အစီအစဉ်တွေကို အကုန်ဖွင့်ပြောတာကိုတော့ သတိထားရပါလိမ့်မယ်။ နိုင်ငံရေးပါတီတခု အနေနဲ့ ကိုယ့်ရည်မှန်းချက်၊ ကိုယ့်လုပ်ငန်းစဉ်၊ ကိုယ့်လမ်းစဉ်တွေကို မကွယ်မဝှက် ထုတ်ပြောတာကို လုပ်ရပါမယ်။ ဒါပေမဲ့ ဒါတွေကို ဘယ်လိုဘယ်နည်းနဲ့ အကောင်အထည်ဖော်မယ်ဆိုတဲ့ အသေးစိပ်တွေကိုတော့ ပြောသင့်မှပြောရပါမယ်။ ကိုယ့် ကိုယ်ကို ခြေချုပ်မိနေစေမယ့် အပြောတွေကို သတိထားရပါမယ်။ ကိုယ်က အာဏာမဲ့ဆိုတော့ နိုင်ငံရေး မိုးလေဝသကို အကဲခတ်တတ်ဖို့ သိပ်လိုပါတယ်။ အထူးသဖြင့် ဒီနေ့လို ယုတ်မာကောက်ကျစ်လှတဲ့ စစ်အာဏာရှင်တွေကြီးစိုးနေတဲ့ အချိန်မျိုးမှာဖြစ်ပါတယ်။ နအဖရဲ့ ဖွဲ့စည်းပုံ ဥပဒေထဲမှာ စစ်တပ်ကို အာဏာသိမ်းခွင့်ပေး ထားတယ်ဆိုတာကို မမေ့သင့်ပါဘူး။ ရှစ်ခေါဘဏီတပ်ကြီးကို ကိုင်ထားပြီး အာဏာသိမ်းခွင့်ရှိကြောင်း တကြိမ်းထဲ ကြိမ်းနေသူတွေကို လက်ကမ်းတာ တခုထဲနဲ့တော့ မပြီးသေးဘူးထင်ပါတယ်။ တခြားလုပ်စရာရှိတာတွေလဲ လုပ်ရမှာပါ။
ဒီလိုအချိန်မှာ နအဖစစ်အစိုးရဟာ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်နဲ့ နိုင်ငံရေး အင်အားစုတွေကို အင်တာဗျူးတကာမှာ ပြောချင်တာ ပြောခွင့်တွေ ပေးထားပြီး ကိုယ်တိုင်ကတော့ ဘာတခွန်းမှ မပြောသေးတာဟာ သိပ်ထူးဆန်းနေပါတယ်။ ဒေါ် အောင်ဆန်းစုကြည်ကို လွှတ်ပေးတာနဲ့ တချိန်ထဲမှာ ဘာလုပ်မယ်ဆိုတာကို သူတို့စဉ်းစား ကြံစည်ပြီး ဖြစ်တယ်လို့ သူတို့ အကျင့်ကိုသိနေတဲ့ လူတိုင်းက တွက်ချက်သိနိုင်ပါတယ်။ ဒါပေမဲ့ အခုတော့ နအဖဟာ ငြိမ်ချက်သား သိပ်ကောင်းနေပါတယ်။ ဘာမှမပြော၊ ဘာမှမတုန့်ပြန်၊ ဘာမှမလုပ်ပဲ နေသလိုပါပဲ။ ဒီအခြေအနေကို နာမည်ကျော်စုံထောက်ကြီး ရှားလော့ခ်ဟုမ်း ဇာတ်လမ်းတွေထဲက လူအကိုးကားဆုံးစာပိုဒ်လေးတခုနဲ့ယှဉ်ပြလိုက်ချင်ပါတယ်။
ရှားလော့ခ်ဟုမ်း- “ထူးတော့ထူးဆန်းတာအမှန်ပဲ ဒေါက်တာဝတ်ဆန်။”
ဒေါက်တာဝတ်ဆန်- “ဘာထူးဆန်းလို့လဲ၊ ခွေးလဲမဟောင်ပါလား။”
မြန်မာနိုင်ငံအတွက် လူ့အခွင့်အရေးချိုးဖေါက်မှုကုလ ဆုံးဖြတ်ချက်
NLD တိုင်းနဲ့ပြည်နယ် အမျိုးသမီးအဖွဲ့နဲ့ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်တွေ့ဆုံ
အမျိုးသား ဒီမိုကရေစီ အဖွဲ့ချုပ်ရဲ့ တိုင်းနဲ့ပြည်နယ်က အမျိုးသမီးအဖွဲ့ ကိုယ်စားလှယ်တွေဟာ ဒီကနေ့ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်နဲ့ တွေ့ဆုံပြီး ဒုတိယ ပင်လုံညီလာခံ ဖြစ်မြောက်ရေးနဲ့ မြန်မာပြည်ရဲ့ လက်ရှိ နိုင်ငံရေး၊ လူမှုရေး အခြေအနေတွေကို ဆွေးနွေးခဲ့ကြပါတယ်။ ဒေါ်အောင်ဆန်းစြု...ကည်က ပင်လုံညီလာခံ ဖြစ်ပေါ်ရေးထက် ပြည်ထောင်စုစိတ်ဓာတ်လို့ ခေါ်ဆိုရမယ့် ပင်လုံစိတ်ဓာတ် ရှိဖို့နဲ့ နိုင်ငံရေးမှာ အမျိုးသမီးတွေ ပိုမိုပါဝင်ဖို့ ပိုအရေးကြီးကြောင်း တုံ့ပြန် ဆွေးနွေးခဲ့ပါတယ်။ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်က အမျိုးသမီးတွေက နိုင်ငံရေးမှာပါဖို့ အရေးကြီးတယ်။ ကျမတို့ နိုင်ငံရဲ့ ထက်ဝက်ကျော်ဟာ အမျိုးသမီးတွေ ဖြစ်တဲ့အခါကျတော့ အမျိုးသမီးတွေဟာ နိုင်ငံရေးမှာ မ၀င်လို့ မဖြစ်ဘူး ဆိုတာကိုလည်း ပြောပါတယ်။ အဲဒီတော့ အမျိုးသမီးတွေ မှန်မှန်ကန်ကန်နဲ့ ကိုယ်လုပ်ဆောင်နိုင်တာကို ဘယ်နေရာကပဲ စလုပ်နိုင် လုပ်နိုင်၊ ဥပမာပေါ့ ကိုယ့်သားသမီးကို ကိုယ်သွန်သင်တာ၊ ကိုယ့်ပတ်ဝန်းကျင်မှာ ရှိတာတွေကို လုပ်နိုင်တဲ့ဘက်က စပြီး လုပ်ပေးဖို့၊ ဒါမျိုးတွေကို လမ်းညွှန်သွားပါတယ်။
ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ဟာ NLD ဌာနချုပ်မှာ ပြုလုပ်တဲ့ ပြည်တိုင်းများက အမျိုးသမီး အဖွဲ့ဝင်တွေနဲ့ တွေ့ဆုံ ညိုနိုင်းပွဲကို တက်ရောက်ခဲ့တယ်လို့ သိရပါတယ်။
နိုင်ငံရေး လုပ်ငန်းတွေ လုပ်ကိုင်သလို လူမူရေး လုပ်ငန်းတွေကိုပါ တွဲပြီး အင်တိုက်အားတိုက် လုပ်ကိုင်ဘို့ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်က ပြည်နယ်နဲ့ တိုင်းအသီးသီးက NLD အမျိုးသမီး အဖွဲ့တွေကို ဒီကနေ့ တွေ့ဆုံစဉ် မှာကြားသွားပါတယ်။ ဒီကနေ့ မနက် ၁၀ နာရီခွဲက စတင် ကျင်းပတဲ့ ပြည်နယ် တိုင်း အသီးသီးက NLD ပါတီ ခေါင်းဆောင် အမျိုးသမီးများ တွေ့ဆုံပွဲမှာ အစည်းအဝေး တက်ရောက်သူ အမျိုးသမီး ၁၅၀ခန့် ရှိပြီး ချင်းပြည်နယ်နဲ့ ကယားပြည်နယ်က လွဲရင် ကျန်ပြည်နယ် တိုင်းအားလုံးက အမျိုးသမီး ခေါင်းဆောင်တွေ တက်ရောက် ကြပါတယ်။ အမျိုးသမီး အဖွဲ့များအနေနဲ့ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် နေအိမ်အကျယ် ချခံထားစဉ် အချိန်အတွင်း မိမိတို့ ပြည်နယ် တိုင်း အသီးသီးမှာ ဆောင်ရွက်ခဲ့တဲ့ လုပ်ငန်းတွေကိုလဲ အသီးသီး တင်ပြခဲ့ကြပါတယ်။ ဒါ့အပြင် အစည်းအဝေး နောက်ပိုင်းမှာ အမျိုးသမီး စွမ်းရည် မြှင့်တင်နိုင်ရေး လုပ်ငန်းများ အကြောင်း ဆွေးနွေး တင်ပြခြင်းအပြင် မေးမြန်းချက် တွေကို ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်က ပြန်လည် ဖြေကြား သွားပါတယ်။ ညနေပိုင်းမှာတော့ သြစတေးလျ သံအမတ်ကြီးနဲ့ အဖွဲ့ဟာ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ကို နေအိမ်မှာ လာရောက် တွေ့ဆုံခဲ့တာလို့ NLD ပြောခွင့်ရ ဦးဥာဏ်ဝင်းက ပြောပါတယ်။ NLD အမျိုးသမီးများ အစည်းဝေးနဲ့ပတ်သက်လို့ RFA ၀ိုင်းတော်သားတွေ စုစည်းတင်ပြထား တာကိုလည်း နားဆင်နိုင်ပါတယ်။
မေး - ဒါဆို ကြံဖွံ အမတ်များဟာ ရုပ်သေးရုပ်များလို့ ခင်ဗျားဆိုလိုတာလား?
ဖြေ - ရုပ်သေးရုပ်ဆိုတာကမှ စင်ပေါ်ကိုအတင်ခံရပြီး က,ရဦးမယ် အခုဟာက အနိုင်ရ ကြံဖွံအမတ်များဟာ ဘယ်တော့မှ အခေါ်ခံရမှာမဟုတ်တဲ့ လွှတ်တော်အတွက် ရွေးချယ်ထားတဲ့ အမတ်များသာဖြစ်တယ် ဆိုတာပဲဗျ။
မေး - ဒါဆိုရင် ၂၀၁၀ ရွေးကောက်ပွဲဟာ နအဖရဲ့ အကြီးမားဆုံး လိမ်ညာလေလုံးကြီးပေါ့?
ဖြေ - ဒီလိုတော့လဲ မဟုတ်ဖူးဗျ။ အော်ရဂျင်နယ် ပလန်ကတော့ စစ်အုပ်ချုပ်ရေး စနစ်ကနေ အရပ်သား အုပ်ချုပ်ရေးစနစ်ကို ပြောင်းဖို့ရယ်၊ အင်တာနေရှင်နယ် ဖိအားတွေ လျှော့ကျအောင်လုပ်ဖို့ရယ် ပါတာပေါ့ဗျာ။ ဒါပေမဲ့ နအဖ အတွင်းမှာ လှုပ်ခတ်မှုလေးတွေ ဖြစ်လာတာ ခင်ဗျားတွေ့မှာပေါ့။ အဓိကပြဿနာကတော့ အရပ်သားအုပ်ချုပ်ရေးကို ဘယ်သူက တာဝန်ယူ အုပ်ချုပ်မှာလဲ။ နောက်ပြီး တချိန်လုံး ခိုင်မာစွာ အုပ်ချုပ်လာတဲ့ စစ်ဦးစီးချုပ်ရာထူးနေရာကကော ဘယ်သူ့ အတွက်လဲဆိုတာပါပဲ။ နအဖဟာ ၂၀၀၈ ခုနှစ် ဖွဲ့စည်းပုံ အခြေခံဥပဒေမှာ စစ်တပ်ကို အရေးကြီးတဲ့ နေရာကို ထည့်လိုက်ခြင်းအားဖြင့် အကြီးမားဆုံး အမှားကြီးကို ကျူးလွန်လိုက်တယ်။ အဲဒီအမှားကြီးကြောင့် ခုကြံဖွံက ၇၆ ရာခိုင်နှုန်းနဲ့ နိုင်ပါတယ် ဆိုတာတောင် အရပ်သားအစိုးရတရပ် ဖြစ်ပေါ်လာရေးဟာ အလှမ်းဝေးနေဦးမှာပဲ ဆိုတာ အခုဆို တော်တော်ထင်ရှားလာပြီ။ တကယ်လို့သာ ၂၀၀၈ ခုနှစ် ဖွဲ့စည်းပုံမှာ စစ်တပ်ရဲ့ complication ကိုသာ မထည့်ခဲ့ဖူးဆိုရင် စစ်ဦးစီးချုပ်ဆိုတဲ့လူဟာ တောင်ရှည်ပုဆိုးနဲ့ အရပ်သားအစိုးရ အကြီးအကဲ ဖြစ်ဖို့ပဲဗျ။ ပြီးခဲ့တဲ့ လပိုင်းတွေမှာ စစ်တပ်အတွင်းမှာ လှုပ်လှုပ်ရွရွ တော်တော်ဖြစ်ခဲ့တာကို ခင်ဗျားတွေ့မှာပေါ့။ အဲဒါဟာ တပ်တွင်းမှာ အားစမ်းပွဲလေးတွေ ဖြစ်ခဲ့တာဆိုရင် မမှားဘူး။ စစ်တပ်အတွင်းမှာ ဆန့်ကျင်အာခံမှုတွေ ဖြစ်လာရင် အချိန်မီ ထိန်းအုပ်ကွပ်ကဲနိုင်မလားလို့ စမ်းပြီးသွားခဲ့ပြီဗျ။ ရလဒ်တွေကတော့ နအဖ ခေါင်းဆောင်တွေအတွက် သိပ်ကျေနပ်ဖွယ်ရာမဖြစ်ခဲ့ဖူး။ အဲ ဗိုလ်သန်းရွှေ အနေနဲ့ ဆွေမျိုးသားချင်း တယောက်ကို စစ်ဦးစီးချုပ်ရာထူးပေးပြီး သူကိုယ်တိုင်က ကြံဖွံပါတီခေါင်းဆောင်အဖြစ် အရပ်သားအုပ်ချုပ်ရေးကို ရယူဖို့ဆိုတာလဲ အင်မတန်မှ ဖြစ်နိုင်ချေ နည်းလှတာကြောင့် ကြံဖွံပါတီဟာ အနိုင်ရသော်လည်း တိုင်းပြည်အုပ်ချုပ်ရေး စနစ်မှာပါဝင်နိုင်ဦးမှာ မဟုတ်သေးဘူး။ ဆိုလိုတာက ကြံဖွံအမတ်တွေဟာ တရားမဝင် အခွင့်အရေးနဲ့ အခွင့်ထူးခံဖြစ်နေနိုင်ရုံကလွဲလို့ ဘာမှထပ်မဖြစ်လာနိုင်သေးဘူးဆိုတာပါပဲ။
မေး - ဒါဖြင့် နအဖ စစ်ဗိုလ်ချုပ်ကြီးတွေ အစုလိုက် အပြုံလိုက် ထွက်သွားတာကောဗျာ။ နအဖဟာ ကြံဖွံကို ဖျက်ဆီးပစ်လိုစိတ် သက်သက်နဲ့တော့ ရွေးကောက်ပွဲကို မလုပ်ခဲ့ဘူးမဟုတ်လား။
ဖြေ - ဗိုလ်သန်းရွှေခေါင်းထဲမှာ ဘာတွေရှိလဲဆိုတာ ကျွန်တော်သေချာ မပြောနိုင်ဘူးဗျ။ ဒါပေမဲ့ သူဟာ စစ်တပ်ရဲ့ နိုင်ငံရေးမှာ လွှမ်းမိုးထားမှုကို မလိုလားဘူး။ အထူးသဖြင့် ဗိုလ်သန်းရွှေဟာ စစ်တပ်ကနေသူထွက်တဲ့ အချိန်မှာ နိုင်ငံရေး အရဖြစ်စေ သြဇာအာဏာ အရဖြစ်စေ စစ်တပ်ဟာ သူရဲ့ အောက်မှာပဲ ဆက်ရှိနေစေ့ချင်တယ်။ ဒီအတွက်ကြောင့် စစ်တပ်မှာ ထင်ရှားတဲ့ ခေါင်းဆောင်ပိုင်းတွေကို ဖယ်ရှားပြီး အရပ်ဘက် အုပ်ချုပ်ရေးစနစ်ထဲကို ပို့လိုက်တာပဲဖြစ်တယ်။ သို့သော်လည်း ခုနကပြောခဲ့တဲ့ အားစမ်းပွဲလေးတွေအရ စစ်အုပ်ချုပ်ရေးနဲ့ အကြီးအကဲရာထူးဟာ ဗိုလ်သန်းရွှေ အနေနဲ့ အရေးအကြီးဆုံးလို့ သဘောပေါက်သွားပုံရတယ်။ အဲဒီမှာ ကြံဖွံထဲလုံးလုံးရောက်သွားတဲ့ ယူနီဖောင်းချွတ်ဗိုလ်ချုပ်ကြီးတွေ အနေနဲ့ မျောက်သစ်ကိုင်းလွတ်တာပဲလို့ ကျွန်တော်မြင်တယ်။
မေး - ဒါဖြင့်ဗိုလ်သန်းရွှေ နေရာကို ဆက်ခံမဲ့ လူရှာမတွေ့သေးသ၍ ဒီဗိုလ်ချုပ်တွေနဲ့ ကြံဖွံဟာ ဒီလိုပဲတန်းလန်းကြီး ဖြစ်နေတော့မှာပေါ့။ ကျွန်တော်ကတော့ အမြီးပေါက်ပြီး ချိုတန်းလန်းဖြစ်နေတဲ့ ကြံဖွံအမတ် အောင်သိန်းလင်းကိုသာ ပြေးမြင်မိတော့တာပဲဗျာ။ ဘာမှ ဖြစ်လာမှာမဟုတ်တဲ့ ရွေးကောက်ပွဲ အတွက် နွားလိုရုန်းရတာကိုး သူ့ခမျာ။
ဖြေ - လောလောဆယ်မှာတော့ ဗိုလ်သန်းရွှေနေရာကို ဆက်ခံဖို့ အလားလာ ကောင်းတဲ့လူ မတွေ့သေးတာအမှန်ပဲဗျ။ ပြည်သူလူထုကို မတရားနှိပ်စက်ညှဉ်းပမ်းပြီး ရလာတဲ့ အကျိုးအမြတ်တွေကို ပုံမှန်ဆက်သနေတဲ့ မြှောက်စားခံ ဗိုလ်ချုပ်ကြီးများကလည်း တကယ်တမ်းကြရင် အောက်ကနေရလို့သာ အောက်ကျခံနေတာကိုး အမြင့်ဆုံးကို တင်ပေးလိုက်ရင်တော့ ဗိုလ်သန်းရွှေလဲ ရှေ့ကသွားသူတွေနောက်လိုက်ရမှာဆိုတော့။
မေး - အခုလောလောဆယ်မှာတော့ စစ်တပ်ကို ကောင်းကောင်း ထိန်းချုပ်နေနိုင်သေးတာပေါ့။
ဖြေ - မထင်နဲ့ဗျ။ ဒေသဆိုင်ရာတိုင်းမှုးတွေ နေပြည်တော်ကို အခေါက်ခေါက်အခါခါ ပြေးနေရပြီဆိုရင် သတိထားဖို့ကောင်းတယ်။ အခု ရက်ပိုင်းအတွင်းမှာလည်း တပ်တွင်း ကြီးမားတဲ့ အပြောင်းအလဲများဖြစ်လာရင် တခုခုတော့ ကျွန်တော်တို့ ပြောနိုင်မှာပါ။
(ဒီ ဆွေးနွေးခန်း များသည် မည်သည့် အသင်းအဖွဲ့ အစည်းကမှ မူပိုင်ယူထားခြင်းမရှိပါ။ လွတ်လပ်စွာ ဆွေးနွေး ဖြန့်ဝေနိုင်ပါသည်။ မည်သည့် အင်တာနက်စာမျက်နှာတွင် မဆို လွတ်လပ်စွာ သုံးနိုင်သည့် royalty free text ဖြစ်ပါသည်။ ယခုတပတ်ဆွေးနွေးခန်း ဆိုလျှင် နအဖ ထောက်လှမ်းရေးများ၊ အစိုးရရုံးဝန်ထမ်းများ၊ ကြံဖွံပါတီဝင်များ နှင့်တကွ အားလုံးသော မြန်မာနိုင်ငံသားတိုင်းကို ဖြန့်ဝေပေးရန် အလေးအနက်တိုက်တွန်းလိုပါသည်။)
လူထုခေါင်းဆောင်ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်နဲ့ Amnesty International အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာလွတ်ငြိမ်းချမ်းသာခွင့် အဖွဲ့ မေးမြန်းချက် အသံဖိုင်
ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်နဲ့ သားငယ်ကိုထိန်လင်းရွှေတိဂုံဘုရား သွားရောက်ဖူးမြော်
မြန်မာနိုင်ငံအတွက် လူ့အခွင့်အရေးချိုးဖေါက်မှုကုလ ဆု...
NLD တိုင်းနဲ့ပြည်နယ် အမျိုးသမီးအဖွဲ့နဲ့ ဒေါ်အောင်ဆန...
လူထုခေါင်းဆောင်ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်နဲ့ Amnesty Inter...